चौधरी फाउण्डेसनद्वारा कान्ति बाल अस्पताललाई इमर्जेन्सी वार्ड हस्तान्तरण – Nepal Press
२०७९ जेठ ५ गते १२:०९
काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसनले २ करोड ५० लाखको इमर्जेन्सी वार्ड निर्माण गरेर कान्ति बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ । ‘सारिकादेवी चौधरी आकस्मिक कक्ष’ निर्माण गरी अस्पताल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
अस्पतालमा आयोजित एक समारोहका बीच नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले उक्त कक्षको उद्घाटन गरेका छन् । चौधरी फाउण्डेसनले १४ शय्याको इमर्जेन्सी वार्ड विस्तार गरी २५ शय्याको निर्माण गरिएको हो ।
चौधरी फाउण्डेसन चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले सामाजिक कामका लागि खोलेका हुन् । आकस्मिक कक्ष हस्तान्तरणमा बोल्दै फाउण्डेसनका महासचिव सारिकादेवी चौधरीले आफू आमा रहेको र आफ्ना सन्तान बिरामी पर्दा आमाहरुको मन कति पोल्छ भन्नेबारेमा आफूलाई गहिरो अनुभूति रहेको बताइन् । नेपाली बालबालिकाको उपचारमा अहिले विस्तार गरिएको आकस्मिक कक्षले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. युवनिधि बसौलालाई निर्माण सम्पन्न भएको वार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । हस्तान्तरणपछि बोल्दै उपाध्यक्ष चौधरीले मुलुककै जेठो बाल अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।
चौधरी फाउण्डेसनले हस्तान्तरण गरेको आकस्मिक कक्षको निर्माण लागत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो । फाउण्डेसनले इमर्जेन्सी वार्डको पुनर्संरचना गर्दै १८ अत्याधुनिक विद्युतीय शय्यासहित २५ शय्या, २५ मनिटर, २५ इन्फ्युजन पम्प, २५ सिरिन्ज पम्प, १४ रेडियन्ट वार्मर, ५ बबल सिप्याप मेसिन, २ इमर्जेन्सी ट्रली, २ फोटोथेरापी युनिट, २ लिक्युड वामर, ईसीजी मेसिन, पोर्टेबल कलर डोप्लर, हाइड्रोलिक सर्जिकल टेबल, ट्रान्सपोर्ट इन्क्युवेटरलगायतका सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ ।
फाउण्डेसनले इमर्जेन्सी वार्डलाई निःशुल्क वाईफाई जोन पनि बनाएको छ । यसको लागि सीजी नेटको इन्टरनेट जडान गरिएको छ ।
प्रकाशित: २०७९ जेठ ५ गते १२:०९
फलफूल पकाउन ‘कार्बाइड’को प्रयोग नगर्न आग्रह
किशोरीको पेटमा अड्किएको चम्चा नर्भिकका चिकित्सकले बिनाशल्यक्रिया निकाले
हैजाको जीवाणु भेटिएपछि ललितपुरमा पानीपुरी-चटपटे बेच्न रोक
बच्चालाई मोबाइल लागुऔषधभन्दा घातक
डुबानका कारण इटहरीका विद्यालय बन्द
हराउँदै गयो रोपाइँको मौलिकता: सुनिनै छोडे असारे भाका
बजेटमाथि छलफल नगरिएपछि एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा
कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र: नाउरको संख्या घट्दै
प्रचण्डको दाबी- एमालेमा बीउ रोपेका छौँ, हेर्नुहोला केही समयपछि फल्छ(भिडिओ)
कोटेश्वरमा हाइसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु
पैदल हिँडेर पार्टीको बैठकमा पुगिन् झाँक्री, अनुहारमा अझै उदासी
गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई शंकर पोखरेलका प्रश्नैप्रश्न- ८ खर्ब रुपैयाँ खोइ ? (भिडिओ)
को हुन नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर ?